Warshad xumbada Polyurethane | Shiinaha Soosaarayaasha xumbada Polyurethane, Alaab-qeybiyeyaal
Iibinta Hot Hot Elastic Polyurethane Dahaarka biyaha aan biyuhu isticmaalin ee loo isticmaalay biyo daadinta dhismaha
Daaweynta Dareeraha Biyaha ee Polyurethane waa filim ficil-celin-qoyan ku daaweynaya oo ka kooban polymer wax aan biyuhu lahayn, samee filim aan xuduud lahayn adoo qoyaanka ka qaadaya hawada; oo leh dabacsanaan sare iyo dheereyn, awood xoog leh oo lagu beddeli karo isbeddellada, nolosha biyuhu illaa 15 sano. Faa'iidooyinka Badeecada: 1. Shuruudaha qoyaanka ee koorsada salka ma aha mid qallafsan, waxay ku jiri kartaa dhismaha wejiga salka badan oo qoyan, sidoo kale waxay ku jiri kartaa xaalad ah in qoyaan isku dhow yahay dhisme weyn. 2. Dahaarka Polyurethane ...
Saldhig saliid Polyurethane xumbo loogu talagalay hagaajinta aasaaska dareeraha biiyaha
Guudmarka Faahfaahinta Degdega ah Damaanad: 1 Sano Adeeg Ka Dib-iibinta: Taageero farsamo oo toos ah Mashruuca Xalinta Awoodda: Naqshadeynta muuqaalka Goobta Asalka: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: boyuhu Tirada Nooca: GF001 Nooca: Joojinta Biyaha, Qalabka Kale ee Ka-hortagga Biyaha: polyurethane, Qaab-dhismeedka Polyurethane : Xumbo Waxyaabaha Muhiimka ah: Foomka polyurethane: Foomka Isticmaalka: Waxqabadka Dahaarka Dhismaha: Shahaadooyinka Cirbadda Cirbadaha Lagu Dirayo: ISO9001 Sifada: Miisaanka Caddaynta Qabow: 10kg Eray Furaha: Liyu Polyu ...
Saldhigga biyaha wax polyurethane xumbo daahan Dahaarka biyuhu
Dareeraha biyaha aan nadiifka ahayn ee polyurethane-ka waa biyo dareere macro molecule ah, waa mid ku habboon dhisidda saldhig qallalan, qoyan, ka dib markii la daboolo way daaweyn doontaa, noqoneysaa mid waara, dabacsanaan sare, aan sun lahayn, xuub aan biyuhu lahayn. Waxay leedahay biyo-ku-saleysan iyo milix-ku-saleysan polyurethane daahan-biyuhu, waa nooc cusub oo deegaanka biyuhu u fiican yihiin. Feature Main: 1.Badeecadani waa midab, daamur lahayn, laba jibbaar (hal) qaybood ah oo daahan biyuhu ka kooban yahay. Dhismaha qabow, farsamada fudud ...
Saliida Laastikada ah ee Polyurethane Pu oo daahan biyuhu ka sameysan yahay oo dahaadh ka sameysan
Guudmarka: Shayga ayaa iska leh falgalka kiimikada Bi-ka ah ee lagu daaweynayo walxaha biyuhu galaan, nooca sheyga ilaalinta deegaanka. Daaweynta ka dib, sheyku wuxuu sameeyaa lakab aan xabad lahayn oo dhammeystiran oo laastik ah, kaas oo hagaajiya biyo-la'aanta iyo u-adkeyn la'aanta mashaariicda dhismaha, gaar ahaan xoog sare iyo ductility, iyo la-qabsi xoog leh oo ku saabsan dildilaaca ama yaraynta koorsada aasaasiga ah. Waa nooc ka mid ah daahan biyaha la mariyo oo qabow lagu dabaqay. Si fudud loo isticmaalo, kaliya waxay u baahan tahay in la isku daro qaybaha A iyo B ...